खेमराज, धनराज र देवराज को जम्काभेटः पौडेलको जित हुन्छ – Online Annapurna
खेमराज, धनराज र देवराज को जम्काभेटः पौडेलको जित हुन्छ
३ मंसिर २०७६, मंगलवार ०५:३२ November 19, 2019 206 Views
पोखरा, ३ मंसिर-नेपाली कांग्रेसका नेताहरू धनराज गुरुङ र देवराज चालिसेको नाम यो उपनिर्वाचनमा सर्वाधिक चर्चामा रह्यो । गत जेठतिर धनराज गुरुङको नाम चर्चामा थियो । असोजतिर देवराज चालिसेको नाम अगाडि आयो र कात्तिक १८ गतेसम्म उनकै नाम चर्चामा रह्यो ।
कांग्रेसले बनायो स्वयंसेवक परिचालन समिति
कास्की कांग्रेसको चुनाव प्रचार अभियान ११ वटै वडामा जारी छ । सबै वडामा घरदैलो र मतदाता भेटघाट कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको पार्टी सभापति कृष्ण केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पोखरा–३३ मा घरदैलो सकेर उम्मेदवार पौडलसहितको टोली पोखरा फर्किएको छ । उम्मेदवार पौडेलसहितका नेताहरू आज पोखरा–९ र पोखरा–१७ मा कोणसभामा केन्द्रित हुनेछन् । कोणसभामा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूले संवोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
तरुण दलको चुनावीसभा
नेपाल तरुण दल कास्की क्षेत्र नं. २ ले मंसिर ६ गते चुनावीसभा आयोजना गरेको छ । पोखरा–७ स्थित राष्ट्रबैंकचोक रत्नचोकको बीचमा सडक डिभिजन कार्यालय अगाडि कार्यक्रम हुने बताइन्छ । सभालाई कांग्रेस नेताहरू गगन थापा, बालकृष्ण खाँड, डा. मिनेन्द्र रिजाल, तरुण दलका केन्द्रीय अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत, उदय समशेर राणा, विद्वान गुरुङ लगायतले संवोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।